Barkadaha dabiiciga ee Madrid - Meelaha ugu wanaagsan xagaaga | Safarka Absolut
Haa, waa run oo xeeb ma leh, laakiin dabcan waa barkadaha dabiiciga ah ee Madrid sidoo kale waxay ka mid noqdeen meelaha aadka loo codsado. Marka heerkulka sare iyo ciidaha ay bilaabaan inay dhuuntaan, ma jiraan wax la mid ah qubeys wanaagsan. Looma baahna mar dambe in loo safro waddanka oo dhan iyada oo la raadinayo meel maalinta lala qaato qoyska.
Barkadaha dabiiciga ee Madrid aad ayey ugu dhowyihiin caasimada waxayna na siinayaan meelo gaar ah oo qumman oo aan ku raaxeysano maalinta shirkad wanaagsan. Maanta waxaan ku tusaynaa kuwa ugu fiican, oo leh dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u ogaato sida jadwalka, qiimaha ama cinwaankooda. Maxaad sugeysaa inaad ku dhex gasho iyaga?
1.1 Sida loo yimaado
1.2 Saacadaha iyo gelitaanka
2 Barkadda Riosequillo
2.1 Sida loo tago Riosequillo
2.2 Qiimaha iyo jadwalka
3 Xeebta Alberche
3.1 Sida loo tago xeebta iyo jadwalkeeda
4 San Juan Swamp
4.1 Sidee loo tagaa keydka San Juan
4.2 Baarkinno badan
5 Barkadaha Las Berceas
5.1 Sida loo tago las Berceas
5.2 Qiimaha iyo jadwalka
6 Sawirka Canencia
6.1 Sida loo tago La Presilla
7 Barkadaha dabiiciga ee La Tejera
7.1 Sida loo tago Las Pozas
Mid ka mid ah barkadaha si loo muujiyo waa waxa loogu yeero Xirmooyinka. Waxay ku jiraan Degmada Rascafría, ee loogu yeero Valle del Paular. Waxaan dhihi karnaa meeshan inay tahay aag madadaalo. Waxay leedahay aagag waaweyn oo cagaaran, oo aad waqti fiican ku heli karto qorraxda. Laakiin marka ay tuujiso, wax u eg maydhashada biyaha dabiiciga ah, oo leh aragtiyo Pico Peñalara. Aagga lagu maydho wuxuu u qaybsan yahay saddex barkadood oo, sidaan nidhaahno, dhammaantood waa dabiici. Waxay kaloo leedahay aag hadh leh iyo baarka xeebta.
Sida loo yimaado
Las Presillas waxay qiyaastii saacad iyo badh u jirtaa Madrid. Laga bilaabo halkan, waa inaad ka qaadataa National AI, illaa kiiloomitir 69. Markaan halkan joogno, iyo ka dib Lozoyuela, waxaan qaadan doonnaa leexasho nagu geyn doonta Rascafría, M-604. Waa inaad waqti badan ku bixisaa Alameda del Valle, sida Rascafría iyo kaniisada Paular. Haddii aad raacdo bas, markaa waa inaad qaadataa midka safka sameeya, Madrid Plaza Castilla, Rascafría, Madrid Plaza Castilla.
Saacadaha iyo gelitaanka
Waa in la dhahaa gelitaanka waa lacag la'aan. Waxa la soo dalacayaa waa aagga baarkinka. Marka, gawaarida waa inay bixiyaan 9 euro, halka 4 mootooyin ah iyo 30 basaska ah. Las Presillas waxay furan tahay maalin kasta 10:00 am ilaa 21:00 pm. Laga bilaabo Juun ilaa bartamaha Sebtember.
Mid ka mid ah barkadaha dabiiciga ee ugu caansan Madrid waa Riosequillo. Xaaladdan oo kale, waxaannu ku haysannaa waxoogaa u dhow caasimadda, maadaama ay saacad kaliya inaga xigto. Waxaa laga dhihi karaa taas sidoo kale waa aag madadaalo. Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada dadka, oo ay ku jiraan kuwa dhaqdhaqaaqoodu yaraaday. In kasta oo ay umuuqato barkad qadiimi ah, aaggan wuxuu biyaha ka qaataa keydka Riosequillo. Halkaan waxaad sidoo kale kaheleysaa makhaayad iyo waliba garoomo isboorti, aalado lulid iyo goobo tamashle ah
Sida loo tago Riosequillo
Barkadda Riosequillo waxay ku taal Buitrago de Lozoya. Waxay ku taalaa meesha laga baxo lambarka 74 ee wadada A-1. Markaan halkan joogno, Riosequillo mar hore ayaa naloo tilmaamay, kaas oo ku yaal bidixda, halka Buitrago de Lozoya wuxuu ku yaal dhinaca midig Haddii aad bas ka raaceyso Madrid, markaa waa inaad qaadataa lambarka baska 191 ee ka baxa Plaza de Castilla una safra Buitrago.
Qiimaha iyo jadwalka
Xaaladdan oo kale, waa inaad bixisaa khidmadda gelitaanka. Waxaad ku bixinaysaa 3 euro dadka waaweyn, halka carruurta iyo kuwa ka weyn 65 ay noqon doonaan 2 euro. Sabtiyada iyo axadaha iyo waliba ciidaha, waxay noqon doontaa 3,50 euro, halka heerka carruurta iyo dadka ka weyn 65 la kordhiyay lana gaarsiinayo 2.50 euro. Xaaladdan oo kale, baarkinka waa lacag la'aan. Wuxuu xiran yahay Isniinta, inta ka harsan todobaadka saacaduhuna waa 11:30 subaxnimo ilaa 20:30 pm, halka dhamaadka usbuuca ay noqoneyso 11:00 am ilaa 21:00 pm.
In kasta oo loogu yeero xeeb, haddana waa mid kale oo ka mid ah meelaha lagu qalabeeyo maydhashada, oo u dhow Madrid. Xaaladdan oo kale, kaliya 47 daqiiqo. Halkan waxaan kula kulannaa webiyada, Alberche, Perales iyo Berciana. Xeebteeda, waxay leedahay ciid aad u wanaagsan, halkaas oo aad u jiifsan karto qorraxda. Waxay ku wareegsan tahay dabiicadda waxayna leedahay aag barbecue, iyo sidoo kale baarkinka iyo maqaayad. Ahaanshaha biyo aad u hooseeya, waxay ku habboon yihiin kuwa yaryar ee guriga ku jira.
Sida loo tago xeebta iyo jadwalkeeda
Waa inaad tagtaa Tuulada Ash, M-507. Wax ka yar saacad, waxaad ka heli doontaa meesha aad u socoto Madrid. Albaabka barkada waa bilaash, halka lagaa rabo inaad bixiso 2,50 euro dhigashada baarkinka.
Mid kale oo ka mid ah barkadaha dabiiciga ah ee Madrid ee ay ahayd inaan xusno ayaa ah San Juan Swamp. Wadar ahaan waa 14 kiiloomitir xeeb. Waxay leedahay dhowr bakhaarro meesha ay sida caadiga ah ka tahay dhaqamada sida qaawinta ama qaar ka mid ah cayaaraha biyaha. Waxay leedahay ciid aad u wanaagsan biyuhuna waa kuwo aad u cad. Waa mid ka mid ah meelaha xasilloonida leh ee na siinaya geesaha nabadda iyo wada noolaanshaha gudaha.
Sidee loo tagaa keydka San Juan
Waxay ku taal qiyaastii 77 kiilomitir Madrid, qiyaastii. Waxaan ka heli karnaa gudaha degmada San Martín de Valdeiglesias. Si aad halkaas u timaado, waa inaad raacdaa wadada M-501. Aaggan waxaa sidoo kale loo yaqaanaa waddada qulqulka.
Xaaladdan oo kale waa in la yiraahdaa taas meesha laga galo gabi ahaanba waa bilaash. Tan ka sokow, waxaan sidoo kale yeelan doonnaa dhowr meelood oo aan dhiganno halkaas oo aynaan wax lacag ah ka bixin doonin.
Barkadaha Las Berceas
Barkadaha Las Berceas waxaa laga heli karaa gudaha Dooxada Fuenfría, ee degmada Cercedilla. Waa aag madadaalo oo cusub, halkaas oo aan ka heli karno nafteena kana soo beddelan karno qolalka illaa baararka, musqulaha iyo xarumaha caafimaadka. Qorrax-ku-maydhista iyo ku maydhiska biyaha cad, waxa kale oo jira jidad socod oo aad ugu dhow.
Sida loo tago las Berceas
Waxaad ka heli kartaa wadada Fuenfría, M-966, kiiloomitir 3,9 ee Cercedilla. Haddii aad gaari kaga safreyso Madrid, waxaad qaadan doontaa A-6 ama haddii aad doorbido, wadada Colmenar M-607. Dabcan, haddii aad ka timid Segovia, markaa waad qaadan kartaa CL-601, M 601, M-602 iyo N-603. Waxa kale oo jira a Bas bilaash ah oo ka taga bartamaha Cercedilla ilaa meeshan. Laakiin kaliya maalmaha fasaxa ama ciidaha iyo inta lagu jiro bilaha Luulyo iyo Ogosto.
Xaaladdan oo kale, qiimayaashu way ka yara sarreeyaan. Albaabka laga soo galo waa 6 yuuro, oo u kacaya 7 fasaxyada iyo dhammaadka usbuuca. Carruurta iyo in ka badan 65s waa inay bixiyaan 4 euro. Kuwa ka diiwaangashan Cercedilla waxay bixin doonaan 2,50 dadka waaweyn iyo 1,50 carruurta iyo wixii ka weyn.
Xaaladdan oo kale, waxaan u soconaa Sierra de Guadarrama halkaasna waxaan ka heli doonnaa Presilla de Canencia. Mid kale oo ka mid ah meelaha lagu maydho dabiiciga ah ee lagama maarmaanka ah. Sidoo kale waxay leedahay biyo nadiif ah, laakiin waa kuwo aad u qabow. In kasta oo marka kuleylku dhaco, tani way ka sii fiicantahay. Waa in la yiraahdaa kiiskan, gelitaanka iyo baarkinka labaduba waa lacag la'aan. In kasta oo kani aanu lahayn ilaalin.
Sida loo tago La Presilla
Waa inaad ka qaadataa A-1 Madrid si aad uga baxdo aagga 69. Waxaad u leexanaysaa M-629 waxaadna imaan doontaa magaalada Canencia. Dhowr kiiloo mitir, halkaan, waxaan ka arki doonnaa La Presilla. Waxay kala yihiin wadar ahaan 89 kiiloomitir.
Barkadaha dabiiciga ee La Tejera
Xaaladdan oo kale waxaan ku harnay barkadaha dabiiciga ah ee La Tejera. Waxay ku jiraan gudaha Aagga madadaalada ee Horcajo de la Sierra. Aag aan caadi ahayn, oo leh qurux gaar ah. In kabadan waxkasta maxaa yeelay waxaan ku raaxeysan karnaa durdur sii socda wadadiisa, dhagaxyada iyo dabeecadda. Aaggan wuxuu ku yaal webiga loo yaqaan Madarquillos ama de la Puebla. Mar labaad, waxaan yeelan doonnaa ilo iyo fadhiyo iyo miisas labadaba. Adigoon ilaawin aagga carruurta, oo ku yaal meel kasta oo ka mid ah meelihan sixirka ah.
Sida loo tago Las Pozas
Waa inaad ka qaadataa lambarka bixitaanka 85 ee A-1. Halkaas ayaad ku qaadan doontaa jihada Horcajo. Waan arki doonaa sida ay waddo yar oo midigta ku taal. Qiyaastii 100 mitir kadib, waxaan arki doonaa calaamadda tilmaamaysa La Tejera. Si toos ah ayaynu u soconaa oo waanu la kulmi doonnaa meeshii aannu u soconnay.
Haddii aadan weli qorshe haynin toddobaadyada soo socda, waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah ay tahay fikradda ugu fiican. Barkadaha dabiiciga ah ee Madrid oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu raaxaysato maalin weyn. Laga soo bilaabo qubeyska wanaagsan ilaa ku saabsan daqiiqado nasasho iyo baashaal, qoyska oo dhan.
Sawirada: Pinterest, go-tandem-madrid.blogspot.com, tuscasasrurales.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Barkadaha dabiiciga ee ugu wanaagsan Madrid